Ikhefu elithokomele enhliziyweni yentaba
Hauts-de-Bienne, Bourgogne-Franche-Comté, i-France
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Julie izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ifulethi lethu lingu-45m2. Ihlanganisa ikamelo lokulala, igumbi lokuphumula elinombhede we-sofa, ikhishi elihle-igumbi lokudlela, igumbi lokugezela, i-WC ehlukene kanye ne-balcony encane ngaphansi kwe-plaid, kodwa emoyeni ovulekile!
Beka phansi amapotimende akho, sinakekela okunye!
Indawo yokungena efulethini izimele ngokuphelele ngenxa yebhokisi eliyisihluthulelo. Kepha sizokujabulela ukuza sizokubingelela mathupha ukuze sikwamukele futhi siphendule imibuzo yakho :)
Ngenxa yokuthi ukuhlala e-Jura akuyona into ngaphandle kwe-fondue noma i-raclette kusihlwa, siye sacabanga ukukunikeza ibhodwe le-fondue kanye nohhavini we-raclette.
Ifulethi lisenkabeni yedolobha iMorez: umbono omuhle wentaba, enazo zonke izinsiza ezitholakala ngaphakathi kwebanga lokuhamba: isitolo esikhulu, imakethe yasekuseni yangoMgqibelo, indawo yokubhaka, izindawo zokudlela, abahlinzeki, ikhemisi.
Emindenini, umbhede, isihlalo esiphezulu kanye ne-stroller nakho kuyatholakala ngesicelo!
I-Morez iyidolobha elincane elisenkabeni yentaba. Zonke izinsiza ziyimizuzu emi-5 ukusuka efulethini: igumbi letiye, indawo yokudlela, iposi, ukuqasha ukushushuluza, isuphamakethe. Idolobha linamandla kakhulu futhi lisingatha imicimbi eminingi unyaka wonke: imakethe kaKhisimusi, imibukiso yasemgwaqweni, amabhola, ukugijima kombala, ingasaphathwa eyemakethe yasekuseni yangoMgqibelo. Futhi kulabo abafuna ukuya ohlaza, ungakwazi ukuhambahamba eduze kwama-quay futhi uvumele ukuqondiswa izindlela ezincane ezinamapulangwe.
Siphila imizuzu emi-5 ukusuka endaweni yokuhlala: ungasithinta nganoma yimiphi imibuzo, kusukela kuzicelo ezihlanzekile zobuchwepheshe kuye emibuzweni yabavakashi :)
Hlola ezinye izinketho ezise- Hauts-de-Bienne namaphethelo